Ukunika amandla i-Webpowering Worksflows ne-Matrox® Monarch EDGE - NAB Bonisa Izindaba nge-Broadcast Beat, Umsakazo Osemthethweni we-NAB Show - NAB Bonisa LIVE
Ikhaya » Okufakiwe » Ukunika amandla iWebroadcarding Webcasting Workflows nge-Matrox® Monarch EDGE
I-video ye-intanethi nama-platforms ngaphezulu-phezulu-phambili (i-OVP ne-OTTs) iqhubeka njalo. Abasebenzisi bangakwazi ukuphuma ngokusebenzisa izingosi zakamuva zokusakaza kwewebhu - njengezinga eliphezulu lokukala (HFR) i-4K, i-4K 360 VR, nokukhethwa kwamakhamera amaningi - asekelwe kuma-desktop abadlali bevidyo, abahamba ngefoni, nabakwa-Smart TV. Idizayinelwe ukuthatha imenyu yokusebenza yokusakaza yokusakaza bukhoma namhlanje, i-Matrox Monarch EDGE inikeza abasakazwayo nabanye abaqeqeshiwe bevidiyo ngekhono eliqinile, eliphansi-latency, ne-dynamic ye-H.264 yokufaka ikhodi ehlanganiswe emshinini osebenzayo ohlangene, ophansi namandla.
Izindlela zokufakazela ezenzakalelayo zokuhlangabezana nezindinganiso zanamuhla
I-codec ye-H.264 iyamukelwa emhlabeni wonke ukuze inikezwe nge-web futhi isakaza bukhoma. Ukuqaliswa okuyingqayizivele kwe-EDGE kwe-EDGE kugcina amazinga wedatha ngokunciphisa kakhulu ngenkathi ukunciphisa i-latency konke ngaphandle kwekhwalithi yokudela. Imisebenzi yokuzimela yokuzimela e-EDGE ye-EDGE ngayinye ingalungiswa ukuze isakaze endaweni eyodwa noma eziningi. Ukusebenza ngalunye kuzuza ngenjini enamandla yokwehlisa nokukhipha amandla ukuqinisekisa ukuthi izithombe ezizwakalayo kuphela nezomsindo zifakiwe.
Iyakwazi ukubhekana nokuningi kwemisebenzi yokusebenza, i-Monarch EDGE inikeza amandla angalinganiswanga, anamandla okufaka ikhodi kuhlanganise nezicelo ezingenakubalwa nokutholakala kwendawo yonke ye-codec ye-H.264. Umklamo we-EDGE osebenzayo, ohlangene wenza kube kuhle ukufakwa kwi-fly-pack, i-OB van, noma ngeyunithi yesibili ye-Monarch EDGE esikhaleni se-1RU-rack. I-4K UHD /HD izimpendulo zenza i-Monarch EDGE ihleleke kunoma yimuphi umcimbi obukhoma ohlanganiswe nokudla okuningi kwekhamera, njengemicimbi yemidlalo namakhonsathi. Njengesikhulumi se-high -ensity encoding platform, i-Monarch EDGE ingakwazi ukwamukela ezine ezimele HD izimpendulo futhi ukuletha ukuhambisa okuningi nge-input ngayinye, okwenza kube kufanelekile ukufakwa kwamakamelo okusebenza ngaphakathi.
Ukubhekana nokusebenza okuvelayo okusebenzayo
I-EDGE ye-Monge ifaneleka ngokuphatha ama-workflows evelayo e-webcasting, njengalabo abenza isidingo sokuqukethwe ku-4K UHD. Ukuze usebenzise kahle i-Monarch ye-high-frame-rate, izinga le-4K UHD lokufaka ikhodi, ama-webcasters kufanele athathe ividiyo esebenzisa ikhamera ye-4K UHD kanye nemishini futhi ahambise ividiyo ye-Monarch ene-encoded e-OVP yokuzikhethela. Kusuka lapho, ama-webcasters angavumela i-OVP ukuthi izinakekele phansi. Isizathu salokhu, ngenkathi ukuphakela okunikezwa ezinqumweni ezincane kune-4K UHD kungase kube kuhle kumaskrini amancane, umphumela ungaphansi kokungaphezulu-okulungile kakhulu, izikrini ze-TV ze-4K UHD ezikwazi ngoba i-TV ngokwayo kufanele ikhuphule okuqukethwe kwayo izinqumo eziphansi. Uma ukusakaza kuhanjiswa ku-4K UHD kuya ku-OVP, lawo ma-OVP azobhekana nokuhlehlisa phansi ukuze akwazi ukulungiselela ubukhulu bezinkrini zesikrini, njenge-laptops, amaphilisi nama-smartphone ukuze izikrini ezincane zizokwazi ukubuka ikhwalithi yesithombe ehlukile. Ukusebenzisa i-Monarch EDGE, ama-webcasters anganikeza ividiyo enhle kakhulu kunoma yimuphi usayizi wesibuko, futhi ababukeli bazobona umkhiqizo wokugcina ngezinga eliphakeme lekhwalithi i-webcaster eyayihlosiwe.
Enye indlela i-Monarch EDGE engasiza ngayo ama-webcasters ukukhulisa ukulethwa kwe-4K UHD ngokuvumela abasebenzisi ukuthi babambe ku-4K UHD futhi bahambise ngobukhulu bezinhlaka eziningi ezihlukahlukene kuma-OVP ahlukahlukene ngesikhathi esifanayo. Isibonelo, i-Monarch EDGE yenza kube lula ukuthuthela ku-Facebook ngesinqumo sayo esinconywayo se-720p, futhi ngesikhathi esisodwa, usakaze ku-YouTube ku-4K UHD - ngenkathi unomphumela ongaphezulu ongaya kwezinye i-OVP noma amaseva wemidiya njenge-Wowza. Ukuze uthole amafomu okusebenza okwenza ukuthi adinge amaningi HD idla, i-Monarch EDGE ingakwazi ukufaka ikhodi amaningi HD imifudlana yokuthunyelwa okungenani ezindaweni ezihlukile ze-16 zokufinyelela okungakaze kube khona nokuvezwa. Abakwa-Webcams bangasebenzisa injini ye-Monarch ye-EDGE enamandla yokwandisa ukufinyelela kwabo futhi bahlanganyele nezethameli zabo lapho bekhona.
Ngezimpendulo ezine ezivumelanisiwe kudivayisi ngayinye, i-Monarch EDGE ingakwazi ukungena kalula futhi ihlomise amafomu wokusebenza we-webcasting enikeza okuqukethwe kokuhlangenwe nakho okuhlangene kwekhamera ye-OVP njengo-YouTube. I
isiteji manje unikeza abasebenzisi ikhono lokukhetha nokushintsha phakathi kwama-angles amaningi wekhamera njengoba bebuka okuqukethwe okubukhoma. Ngaphezu kwalokho, amaseva wezindaba ezikhethekile ezihlose ukuqeqeshwa kwezemidlalo kanye nezemidlalo ezimemezela izimakethe zingasebenzisa ngokunenzuzo izimpendulo ezine ezihlanganisiwe ze-Monarch EDGE ukuze zondle ama-replay amaningi aphindaphindiwe futhi abuyekezwe. I-EDGE ye-Monkark seyidonswe futhi ikhethwe yiqembu lamazwe ngamazwe, eliphezulu-football association kanye namathimba ekomidlalo njengengxenye ebalulekile yezixazululo zabo zokudlala ukudlala.
Amandla e-EDGE we-EDGE ukusekela izinhlobo ezihlukahlukene zokusakaza ivumela ukuthi ifanelane ngokuzenzekelayo kokubili kokusebenza okusebenzayo kokubili kokusebenzisa amanethiwekhi avulekile nendawo. Ama-OVP amaningi namaseva wemidiya aqala ukusekela i-SRT, inqubo emisha yokusakaza okuvela emithonjeni evulekile ehlinzeka ukuthembeka kwefomethi ethandwa kakhulu ye-RTMP, ngenkathi kunciphisa isikhathi sokusebenzisa ekuxhumaneni okuvulekile. Emanethiwekhi wendawo, ama-webcasters angakhetha i-MPEG-2 TS noma i-RTSP, kuye ngokuthi yini edingekayo yokusebenza.
Ukuletha isipiliyoni esingaphezu kwalokho okuhlinzekwa izinhlelo ezijwayelekile zendabuko, i-Monarch EDGE ihlanganisa izinto zakamuva ezenzakalweni ezibukhoma-ze-webcasting ukuvumela ochwepheshe bevidiyo ukuba basakazele ukuphoqelela okuqukethwe okubukhoma kunoma yimuphi usayizi wesibuko. Kusukela ekusebenzeni okuhlangenwe nakho kwe-multi-kamera ku-intanethi, ukuhlomisa abaqeqeshi ngamathuluzi we-replay eceleni kwanoma imuphi umcimbi wezemidlalo, i-Monarch EDGE iyinhlangano yokusebenza ehlelekile yokufaka ikhodi yokufaka amafomu wokusebenza we-webcasting kakhulu kunamuhla.
· Izimpendulo ezine ze-SDI (3 x 3G, 1 x 12G)
· Ukubuka kuqala kwe-DisplayPort (imodi eyodwa noma i-quad)
· Analog yomsebenzi noma umsindo ohlanganisiwe
· Ukukhishwa kwe-Genlock
· Izixhumi ezimbili ze-GigE zenethiwekhi
· Compact 1RU isigamu-ububanzi
· Iphaneli langaphambili lesimo nokucushwa
· Amandla aphansi
· I-Matrox Monarch i-EDGE Control Hub ihlinzekwe nge-Windows application
Ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe, vakashela matrox.com/video/edge/broadcast-beat
Injini yokusakaza Ukusakaza Ubuchwepheshe CES2017 Umnikelo I-Graham Chapman i-Prmoted to Editor I-MStar Amaloli angaphandle asakaza SoftAtHome I-SoftAtHome, i-MStar, i-CES2017 I-Ultra HD Forum Umlingisi wevidiyo esingokoqobo virtual	2019-06-14
Ngaphambilini: Amathuba okude ekuthumeni kokuthunyelwa kwezokuthunyelwa
Olandelayo: I-PBT iklayenti ye-EU CLUBBING TV iqala i-Ibiza ne-Formentera -